Toddoba Knights cusub 2 wuxuu ku bilaabay aduunka oo dhan isagoo wata ciyaar-lacag-la'aan ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Toddoba Knights cusub 2 wuxuu ku bilaabay aduunka oo dhan isagoo wata ciyaar-lacag-la'aan ah
Taageerayaasha Netmarble ciyaartiisii ​​asalka ahayd iyo ciyaarta mobilka ee muddada dheer socotay ee Toddoba Knights waxay hadda bilaabi karaan cutub cusub, qoto dheer, iyo muuqal shaleemo ah oo magac-sheegasho ah iyadoo Toddoba Knights 2 ay si rasmi ah u soo bandhigtay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee adduunka oo dhan. Ciyaarta hadda waxay diyaar u tahay soo dejinta bilaashka ah ee App Store iyo Google Play. Isticmaalayaashu waxay daawan karaan fiidiyoow cusub oo loogu talagalay furitaanka kanaalka YouTube ee Toddobada Knights 2 ee rasmiga ah.
Toddoba Knights 2 waxay dhacdaa 20 sano ka dib ciyaarta asalka ah ee Toddoba Knights. Sheekadan cusub waxay xarumaha Daybreak Mercenaries ee ay hogaamiso Lene, gabadha Eileen, oo xubin ka ah toddobada Knights ee ciyaarta asalka ah. Calooshood-u-shaqaystayaasha Daybreak waxay bilaabeen safar si ay u helaan Rudy, xubinta ugu dambeysa ee Todobada Knights, ka dib dhacdooyin taxane ah oo ku lug leh gabadh qarsoodi ah oo lagu magacaabo Phine. Taageerayaasha adduunka oo dhan waxay hadda bilaabi karaan ururinta iyo horumarinta geesiyaasha soo jiidashada leh iyagoo ku hawlan sheeko shaleemo qoto dheer oo qoto dheer.
Si loogu dabaaldego bilawga ciyaarta, Netmarble waxa ay qorshaynaysaa dhacdo "Taliyaha cusub ee Mercenary Special Login Daily", taas oo u oggolaanaysa isticmaalayaasha inay furaan abaal-marinno kala duwan, oo ay ku jiraan Fasalka Halyeyga ah ee 'Saint of Light Karin' ee maalinta 7aad ee ciyaarta.
Tilmaamaha muhiimka ah ee ciyaartoydu ay sugi karaan marka la bilaabayo waxaa ka mid ah:
• Halyeeyada soo jiidashada leh ee la ururin karo: Waxaa jira wadar ahaan 46 xaraf oo diyaar ah si loo ururiyo marka la bilaabayo, oo ay ku jiraan jilayaasha caanka ah ee ka soo jeeda toddobadii Knights ee asalka ahaa oo ay ku biireen toddoba Knights 2 cusub.
Dagaallada Madaxda oo Caqabad ku ah:
o Ciyaartoyda waxa ay sugi karaan in ay istaraatiijiyad ku sameeyaan sagxaddo kala duwan iyaga oo isticmaalaya halabuuro geesiyaal oo kala duwan, qaab-dhismeedka iyo xayawaanka rabaayada ah
o Intaa waxaa dheer, ciyaartoydu waxay geli doonaan dagaallo iyagoo adeegsanaya xirfado leh muuqaallo cajiib ah, iyagoo ka qayb qaadanaya dagaal kooxeedyo-waqtiga-dhabta ah oo ay hal mar gacanta ku hayaan ilaa afar geesiyaal.
Sheeko shaleemo qoto dheer, Immersive: Toddoba Knights 2 waxay soo bandhigtay sheeko qoto dheer oo soo jiidasho leh oo leh laba saacadood oo shaleemo tayo sare leh oo gooyay taageerayaasha doorka-ciyaar si ay ugu raaxaystaan.
Toddoba Knights 2 waa RPG moobilka shaleemada ah kaas oo u oggolaanaya ciyaartoydu inay ururiyaan oo ay horumariyaan geesiyaal soo jiidasho leh oo qaabab iyo cabbirro leh iyagoo ku hawlan sheeko shaleemo qotodheer oo qoto dheer iyada oo ay ugu mahadcelinayaan kontaroolada waqtiga-dhabta ah iyo ciyaaraha gudaha ee leh isku-dhafka geesinimada, qaababka, iyo xayawaanka rabaayada ah Soo saarista jilayaal badan oo lagu sawiray garaafyo tayo sare leh oo cajiib ah oo ay ku shaqeeyaan Unreal Engine 4, Seven Knights 2 ayaa galin doona ciyaartoyga taxane run ah oo soo bandhigaya ciyaarta xiisaha iyo hal-abuurka leh ee Todobada Knights ee ay ku raaxaystaan ​​ciyaartoyda aduunka.
Ilaa hadda, Toddoba Knights waxay arkeen 60 milyan oo la soo dejistay adduunka oo dhan. Toddoba Knights 2 ayaa sidoo kale guulo ka gaaray Kuuriya, iyagoo kaalinta #1 ka galay App Store iyo #2 Google Play marka loo eego dakhliga la helay ka dib markii la bilaabay Noofambar 2020. Ka dib bilawga caalamiga ah, Toddoba Knights 2 waxay diyaar u ahaan doonaan inay ku ciyaaraan laba iyo toban luqadood, oo ay ku jiraan Ingiriis, Jabbaan, Shiine la Fududeeyay, Dhaqanka Shiinaha, Thai, Portuguese, Isbaanish, Jarmal, Talyaani, Faransiis, Ruush, iyo Indonesian.